बडादसैँको शुभकामना !
बाह्रखरी परिवारका तर्फबाट हाम्रा पाठक, विज्ञापनदाता, शुभेच्छुक एवं सहकर्मी सबैलाई बडादसैँ, २०७६ को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना !
२०७६ असोज १८ शनिबार ११:५५:००
यदाकदा कोही कसैले विवादमा पार्ने र महत्त्व घटनाउने प्रयत्न गरे पनि बडादसैँको व्यापकता घटेको छैन । चाड मनाउने शैलीमा परिवर्तन भइरहेको छ तर मनाउन छाडिएको छैन । यह नै दसैँको जीवन्तताको प्रमाण हो । पक्कै पनि फजुलखर्ची, देखासिकी र अस्वस्थकर खानपानजस्ता विकृति पनि दसैँको व्यापकतासँगै बड्दै गएका छन् । दसैँ मनाउन वर्षभरको कमाइ सिध्याउनेहरूको संख्या पनि थोरै छैन । तर, यो पर्वको नभएर व्यक्तिको कमजोरी हो । परिवारलाई सम्झाएर गच्छेअनुसार दसैँ मनाउने हो भने विकृतिहरू आफैँ नै साम्य हुँदै जानेछन् । समाजमा देखिएका विकृतिका लागि दसैँलाई दोष दिन मिल्दैन ।